Horizontal တံတောင်ဆစ် 90 ° S.S.M. INDUSTRY CO., LTD.
Horizontal တံတောင်ဆစ် 90 °
အလျားလိုက်တံတောင်ဆစ် 90 °ဦးလျှပ်စစ်စနစ်ကမိုးလုံလေလုံနှင့်ပြင်ပတွင်နှစ်ဦးစလုံးအဆောက်အဦးကို install များအတွက် sed ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာစံပစ္စည်းအားလုံးကိုအခွအေနေအဘို့အကြမ်းခံသည်။ ပူ-သို့ကျဆင်းလာသွပ်ရည်စိမ်နှင့်အတူမျက်နှာပြင် Coating သို့မဟုတ် polyester အမှုန့်အရောင်ပက်ဖြန်း။
12/39 Moo. 10 Pao go here in Project, Soi 6, Khlongkhoi, Pakkret, Nontaburi 11120 Thailand.